Shopping ထွက်တတ်တဲ့ အစ်မတွေ ညီမတွေ သတိထားကြပါ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » Shopping ထွက်တတ်တဲ့ အစ်မတွေ ညီမတွေ သတိထားကြပါ။
Posted by cobra on Jun 28, 2010 in Community & Society, News | 11 comments
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း က သူ့ အစ်မ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ ခဲ့တာတွေကို ကျွန်တော့
ကိုပြောပြတယ် ဘလောက်မှာတင်ပြီး အသိပေးပေးဖို့ ကိုလည်း ကျွန်တော့်ကို
တောင်းဆိုတယ်လေ။ ဖြစ်ပုံက ဒီလို……..တဲ့
ဒီနေ့ အိမ်ပြန်လာတော့ ဒေါကြီးမောကြီးနဲ့ကျွန်တော်က ဘာဖြစ်လာတာလဲလို့မေးတော့
သူ့သူငယ်ချင်း ပလာဇာမှာ အင်္ကျီသွားဝယ်တုန်းက အဝတ်လဲခန်းမ အဝတ်လဲတဲ့ ပုံတွေ
အင်တာနက်မှာရော ဖုန်းတွေမှာပါ ရှိတယ်တဲ့။ အဲလို ပလာဇာမှာ မိန်းကလေးတွေ
အဝတ်လဲခန်းမှာ camera တွေ တပ်ပြီး ဓာတ်ပုံတွေ ခိုးရိုက် ပြီးတော့ forum
တွေမှာတင် ယောကျာင်္းဆိုတဲ့ကောင်တွေက အဲလိုကိစ္စတွေဆို တခြားလူတွေပါ
ဖုန်းထဲမှာပုံတွေထည့် ဖုန်းအခြင်းခြင်း bluetooth နဲ့ချိတ်ပြီးပေး
ပုံတွေကို share လုပ်ကြ ပုံတွေကြည့်ပြီး ပုံထဲက တစ်ယောက်ကို အပြင်မှာ
မြင်တော့ ပြုံးစိစိနဲ့ကြည့်သွားကြတာ စဉ်းစားကြည့်ဗျာ အခုတစ်ယောက်က
အဝတ်လဲခန်းကလဲ နောက်မှာ အဖြူရောင်ကြီးကာထား ဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ background
အဖြူကြီးနဲ့ပေါ့ မသိရင် မကောင်းတာ လုပ်စားနေတဲ့ မိန်းကလေး ဈေးခေါ်တာ
မြန်မာအချင်းချင်းဗျာ အဲလို လူမဆန်တာတော့ မကောင်းဘူး
ဓာတ်ပုံခိုးရိုက်တဲ့ကောင်တွေ စဉ်းစားကြည့်ဗျာ ခင်ဗျားတို့ညီမ
အဲ.. အဲလိုပြောရင် နာမှာမဟုတ်ဘူး ခင်ဗျားတို့ ကောင်မလေး ခင်ဗျားတို့ မိန်းမ
ခင်ဗျားတို့ သမီး အဲလို ရိုက်ခံပြီး သူများတွေကို ပုံတွေ မျှခံထိရင်
ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်ချင်းစာဖို့ကောင်းတယ် အဲလို လူမဆန်ပဲ
ကိုယ်ကျိုးအတွက် မလုပ်သင့်ဘူး နောက်ပြီး ဆိုင်ရှင်တွေ ခင်ဗျားတို့ကော
ဘာကြောင့် လူမဆန်တာလဲ ခင်ဗျားတို့ စီးပွားရေးလုပ်နေတာမဟုတ်လား
ဝယ်သူကိုလေးစားပေါ့ဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ ပိုက်ဆံရတယ် အဲလိုမျိုး camera
လာတတ်ထားတဲ့ ကောင်တွေက ခင်ဗျားတို့ကို ၁ပုံဘယ်လောက်နှုန်းနဲ့ ရှင်းပေးတယ်
ကျွန်တော် ထပ်ပြောမယ် ခင်ဗျားတို့ ကောင်မလေး ခင်ဗျားတို့ မိန်းမ
အဲလို ရိုက်ခံပြီး သူများတွေကို ပုံတွေ မျှခံထိရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ…?
နောက်ပြီး လာဝယ်တဲ့လူတွေက မိကောင်းဖခင် သားသမီးတွေ…? အရင်ကဆို အဲလိုမျိုး
ပုံတွေနဲ့ မိကောင်းဖခင်သားသမီးတွေကို ငွေညှစ်၊ဖျက်စီးခဲ့တဲ့
ကျွန်တော်သိတယ် မပြောချင်ဘူး ပြောလို့လည်းမကောင်းဘူး။ နောက်ပြီး
ဘာပဲ ပြောပြော ကိုယ်ချင်းစာတရား မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်လေး နည်းနည်းလောက်
ထည့်ကြပါ အစ်မတွေ ညီမတွေ က လည်း
အင်္ကျီဝယ်တဲ့အခါ သတိထားပါ အပေါ်ကနေပဲ ထပ်ဝတ်ကြပါ အဲလိုပဲ တခြား စကပ်တို့
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နည်းပညာခုတုံးလုပ်ပြီး လုပ်စားနေတဲ့ကောင်တွေ ရှိတယ်
ကျွန်တော်က ပြောလိုက်တယ် တရားစွဲပေါ့ တရားမစွဲခင် အမျိုးသမီးရေးရာကို တိုင်
တရားစွဲဖို့ ဆိုင်မမှတ်မိရင် ပလာဇာကို တရားစွဲဗျာ တစ်ရှက်ကနေ နှစ်ရှက်ထက်
တခြားလူတွေ အဲလိုမဖြစ်ဖို့လိုတယ်ထင်တယ် အဲလိုပဲ ပြောလိုက်တယ် အစ်မလည်း
ပြန်ရောက်ကတည်းက ပါးစပ်က တတွတ်တွတ်နဲ့ ထိုင်ဆဲနေတာ ဆဲလို့ဘာလုပ်လို့ရမှာလဲ
ဒါကြောင့် ငါလည်း ဒီစာလေးကို နိူင်ငံခြားမှာ BLOG တစ်ခုကို ရင်ထဲက
ကိုယ်ပိုင် ခံစားချက်တွေ အားလုံးကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် အနှောက်အယှက်ကင်းကင်း
ရေးသားနိူင်ခွင့်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းမင်းဆီကိုပဲရေးပို့ လိုက်တယ်ကွာ မင်း BLOG
မှာလည်း ဒီအကြောင်းရာတွေ ဖော်ပြပေး စေချင်တယ် သူငယ်ချင်းရေ။
ဒီ POST ကို COPY လုပ်၍ FWRD MAIL ဖြစ်စေ၊ မိမိတို့ ရဲ့ BLOG များတွင်
ကူးယူ တင်ပြ၍ ဖြစ်စေ၊
နှိုးဆော်ပေးခြင်းဖြင့် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ မှူ့ ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ 
မြန်မာမိန်းကလေးများရဲ့ ချစ်မြတ်နိူးစရာ စရိုက်လေးတွေနဲ့့ကမ္ဘာပေါ်မှာ
အရှက်အကြောက် ကြီးမားတတ်ကြတဲ့ မြန်မာ့အမျိုးကောင်း သမီး ရတနာလေးများရဲ့
အရှက်နဲ့ သိက္ခာတို့ ကို လူမဆန်စွာ ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းနေကြပြီး
ကိုယ်ချင်းစာတရား နဲ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်တွေကင်းမဲ့နေကြတဲ့ သူတွေရဲ့
့တတ်အားသ၍ ၀ိုင်းဝန်းကာကွယ် ပေးစေလိုပါကြောင်း ကျွန်တော် က
အစ်မတွေ ညီမတွေ အားလုံးကလည်း ကိုယ့်အန္တာရာယ်ကိုကိုယ် ဂရုတစိုက်နဲ
သူငယ်ချင်းဆီမှ mail ကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
တစ်ရက်မှာ အသိတစ်ရောက်က ဖိုင်တစ်ဖိုင်လာပေးပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဇ်က 743 MB ရှိပြီး ဗွီဒီယိုဖိုင်ပေါင်း 177 ဖိုင်ပါပါတယ်။ ရင်နာစရာကောင်းလိုက်တာဗျာ။ အဲဒီဖိုင်တွေအားလုံးဟာ မြန်မာပြည်ဖြစ် ခိုးရိုက်၊ ခိုးဖြန့်။ အများစုက မိကောင်းဖခင်သားသမီးတွေ။ ဒီပြဿနာဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာ မိကောင်းဖခင်သားသမီးများ သတိမမူမိကြသေးတာ စိုးရိမ်စရာပါ…
If you have that file, please share me o naw.:-)
ဒါ လုံး ၀ မဖြစ်သင့်ဘူး ကိုယ်လူမျိုးကို ကိုယ်မှ့ မကာကွယ်ရင် ဘယ်သူကာကွယ်မလဲ?
မြန်မာလူမျိုးကိုမှ မဟုတ်ပါ ဘယ်အမျုိးကောင်းသားသမီးရဲ့ပုံကိုမှ အခုလိုခိုးမရိုက်သင့်ပါ။
သူ့မကောင်းဘူးဆိုတာ သိနေရင်ကောင်းသူက ရှောင်ပေးကြပါဗျာ။
နောက်တခါ ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဆိုင်မှာ ကင်မရာတပ်ထားတာတွေ့လို့ကတော့ ဖြုတ်ပြီးတော့တာရောင်းစားပြစ်ဗျာ…
အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ စိတ်ဓါတ်တွေက နိမ့်ကျလာပြီ ။ အ၀တ်လဲခန်းမှာကင်မရာတတ်တာကလည်း သူတို့ ဘာသေချာမြင်ရမှာလဲ ။ အ၀တ်လဲတဲ့အချိန်ကရော ခဏတာပဲဟာကို ။ ဒါကိုကြံဖန်ပြီးယုတ်မာချင်သေးတယ် ။ ကင်မရာအတတ်ခံတဲ့ဆိုင်ရှင်တွေကလည်း နောက်ဘ၀လူစဉ်မှီမှာတောင်မဟုတ်ဘူး ။ နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ြ့ည့်မှန်ရဲ့နောက်မှာလည်း ကင်မရာတတ်ထားနိုင်ပါသေးတယ် ။ တစ်ချို့မှန်တွေကလည်း မှန်နောက်မှာ ကင်မရာတတ်လို့ရတယ် ။ တစ်ဖက်မြင်မှန်နဲ့ နှစ်ဖက်မြင်မှန်ဆိုပြီးရှိတယ် ။ တစ်ဖက်မြင်မှန်ကတော့ရိုးရိုးမှန်အမျိုးစားပါ ။ နှစ်ဖက်မြင်မှန်ကတော့နောက်ကွယ်ကနေ ကင်မရာ တတ်လို့ရတဲ့အမျိုးစားပါ ။ ခွဲခြားချင်ရတော့မှန်ကိုလက်နဲ့ သွားထောက်လိုက် မျက်နှာပြင်နဲ့ လက်ချောင်းလေးထိတဲ့နေရာမှာ Gap ဖြစ်နေရင် ရိုးရိုးမှန်မှာ အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့နောက်ကွယ်ကနေ ကင်မရာတတ်တဲ့မှန် သို့မဟုတ် ၊ အပေါက်ကိုကွယ်ထားတဲ့ မှန်မျိုးဖြစ်ပါတယ် ။ အပြင်ကလူက သေချာမကြည့်ရင် ရိုးရိုးမှန်လို့ပဲထင်တတ်ပါတယ် ။
ဆိုးရွားလိုက်တာ စိတ်ဓါတ်တွေက စုတ်ပြတ်သတ်နေပြီ အဲ့လိုလူမျိုးတွေရှိနေသမျှ တို့နိုင်ငံလဲဘယ်တော့မှတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူး ။
စီးပွားရေးသမားတွေနေမှာပေါ့ …. ငွေရမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ညီမ ကိုတောင် …… ခံခိုင်းမယ့်ကောင်တွေနေမှာပေါ့ …. ကျွန်တော်လည်းတွေ့ဖူးပါတယ် … မကောင်းတာကိုမှ အပျော်လို့ထင်နေလား မသိဘူး …… တရားသာစွဲလိုက်ဗျာ …. ခင်ဗျားတို့ဝယ်တဲ့ဆိုင်ကိုပြောတာ …. သူတို့မှာတာဝန်ရှိတယ် ….. တရားစွဲလိုက်ပါ …..
ကိုယ့်အမျိုးဂုဏ်ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပဲ မမြှင့်တင်ဘဲနဲ့ နှိမ့်ချဖို့ပဲ ကြိုးစားနေကြတာတော့ ရင်နာစရာ အကောင်းဆုံးပဲ… မလုပ်သင့်တဲ့ လုပ်ရပ်ပါ…. မြန်မာနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးများလည်း သတိထား ဆင်ခြင်ကြပေ့ါဗျာ…..
အဲ့လိုလူမျိုတွေကိုဆိုအရမ်းမုန်းတာပဲ၊ဒီိသတင်းတွေကြားပြီကတည်းကဆို တို့လဲshopping ထွက်ရင်အ၀တ်လဲတဲ့အခါအရမ်းသတိထားနေရတယ် မိန်းကလေတွေလည်းသေသေချာချာလေးသတိထားကြပါလို့။